Umvelisi wefilimu omdaka (BM) | Yinrich
Ikhaya > Iimveliso > Izixhobo zekhitshi > Umpheki wefilimu omdaka (Bm)
MncinciUmpheki wefilimu yenzelwe indawo yokupheka equkethe iprotein okanye izinto ezibuthathaka zobushushu. Ixesha lokuhlala lemveliso kumphekisi wefilimu omdaka mfutshane kakhulu. Le nkqubo yenzelwe uxinzelelo oluqhelekileyo, uxinzelelo, vacuum okanye ukupheka kweposi. Ukusetyenziswa kompheli wefilimu omdaka unokubonelela ngeziphumo zokupheka ngokukhawuleza, kwaye isiphumo sehle kakhulu. Oku kuphuculwa ngokukhawuleza kuthetha ukuba inkqubo yokuguqula iswekile okanye naziphi na izithako zobisi zitshisa ubuncinci ngexesha lokupheka kwisiseko sokugqibela.
I-Yinrich ngowona mvelisi wefilimu onesidima sefilimu, ubonelela ngesixhobo sekhitshi, umatshini wokugcwalisa i-biscuit, itshokholethi, kunye nompheki wefilimu omdaka ngefuthe lokuphuma.
Umpheki wefilimu omncinci (BM)
Isisombululo seswekile sondliwa ngokuqhubekekayo kwicandelo lokupheka le-BM, eliqukethe isifudumezi, abapheki befilimu, inkqubo yokubonelela nge-vacuum, impompo yokondla, impompo yokukhupha njl njl njl. Zonke iimeko zokupheka zilawulwa nge-PLC. Bonke ubunzima buthuthwa ngokulayisha kunye nokulayishwa kweempompo ezilawulwa sisiguquli samaza.